Ny famantaranandron'i Oppo, ny Oppo Watch Series, dia aseho amin'ny 6 martsa | Androidsis
Ny tsenan'ny smartwatch amin'ny ankapobeny dia manjaka ary hitohy hanjaka amin'izao fotoana izao, amin'ny alàlan'ny Apple Watch, ny smartwatch tsara indrindra misy amin'izao fotoana izao, raha mbola mpampiasa iPhone ianao. Raha mpampiasa Android ianao, mihasarotra ny raharaha, miankina amin'ny mpanamboatra ny smartphone sy ny smartwatch anao.
Raha samy mitady hampidirina lafatra ianao (satria manolotra antsika amin'ny Apple Watch i Apple), ny vahaolana atolotry Samsung antsika, anio Io no tsara indrindra amin'ny Android. Ivelan'ny fampifangaroana tanteraka amin'ny smartphone (izay misy ny fahasoavan'ireo fitaovana ireo), dia afaka mahita vahaolana marobe isika. Ny farany nanatevin-daharana ny antoko dia ny Oppo Watch Series.
Ny mpanamboatra Aziatika Oppo dia nanambara tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter azy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny Apple Watch, ny Oppo Watch Series, smartwatch miaraka amina endrika mitovy amin'ny natolotry ny Apple Watch, famolavolana izay ho hitantsika ihany koa ao amin'ny interface interface (farafaharatsiny izay no dikan'ilay sary miaraka amin'ilay dokambarotra).
Ny endrika ivelany an'ny Series Oppo Watch Series tsy misy satro-boninahitra mihodina toa ny Apple Watch, kosa asio bokotra ara-batana, na eo ankavanan'ny fitaovana sy eo ambany (mitovy amin'ny Apple Watch). Ny endriny dia toradroa (toy ny Apple Watch) ary hitantana ny WearOS, ny rafitra fiasan'i Google ho an'ny smartwatches.
Ny maka tahaka no fomba tsara indrindra handokafanahoy ny sasany, fa Izy io dia areti-mandringana efa hatrizay ary hitohy hifandraisany amin'ireo mpanamboatra Android maroIreo mpanamboatra izay mandray an'i Apple foana ho toy ny loharanom-pahalalana, ohatra iray hafa io. Soa ihany, nandao an'io lalana io i Samsung taona vitsy lasa izay.
Amin'ity hetsika fampisehoana Oppo Watch Series ity ihany dia ho hitantsika koa ny Oppo Find X2 ary Oppo Find X2 Pro, ilay vaovao filohan'ny mpanamboatra aziatika ho an'ny taona 2020 ao anatin'ny faritra avo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Ny smartwatch an'ny Oppo, ny Oppo Watch Series, naseho tamin'ny 6 martsa
Aiza no hividianana S Pen ho an'ny Galaxy Note
Azonao atao ny mampandeha ny maody maizina amin'ny Xiaomi na Redmi